Suurtagal ma tahay in uu dagaal ka dhex qarxo Iiraan iyo Mareykanka? - BBC News Somali
Image caption Wasiirka Arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Mohammad Javad Zarif
Wasiirka Arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Mohammad Javad Zarif ayaa sheegay in aanu aaminsaneyn in dagaal ka dhex qarxi doono Iran Iyo Mareykanka, iyada oo ay sii kordheyso xiisadda u dhaxeysa labada dal.
Javad Zarif ayaa u sheegay wakaaladda wararka dalka Iiraan ee IRNA, in Tehran aysan rabin dagaal xilligan.
Mareykanka ayaa maalmo ka hor Maraakiib iyo Diyaaraddaha dagaalka u daabulay gacanka khaliijka, tallaabadaas oo ay Iiraan ku tilmaantay khatar amni oo ku soo fool leh.
Balse Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegey in uu ka fogaanayo isku dhac.
Mr Zarif oo la hadlayay IRNA markii uu soo dhameystay booqosho uu ku tagey dalka Shiinaha Sabtida maanta ah ayaa sheegay in Mr Trump uusan rabin dagaal hase yeeshee la taliyaashiisu ay ku riixayaan dagaal iyaga oo sameeynaya marmarsiiyo ah in Mareykanku uu ka awood badanyahay Iiraan.
Waxaa uu intaa ku daray: "Dagaal ma jiri doono sababtoo ah ma dooneyno dagaal".
Goor sii horreysay ayuu David Petraeus oo ah janaraal howlgab ah oo Mareykanka u dhashay waxa uu BBC-da u sheegay inuu rumeysan yahay in xukuumadda Washington looga baahan yahay inay tix galiso digniinaha uga imaanaya waaxda gaashaandhigga Pentagon-ka ee ku saabsan caqabadda ka imaan karta haddii tallaabo milatari laga qaado Iiraan. Wuxuu sidoo kale sheegay in Iraan ay nafteeda halligeyso haddii ay weerar ku qaaddo Mareykanka.
Xiisadaha u dhaxeeya Tehran iyo Washington ayaa cirka isku shareeray markii uu dhawaan Mareykanka sii xoojiyay cunaqabateynada uu saaray dhoofinta saliidda Iiraan.
Iiraan dhankeeda hakisay ballanqaadyadii heshiiskii caalamiga ahaa ee hubka Nugliyeerka, iyadoo ku hanjabtay in ay dib u billaabayso bacriminta Uranium-ka.
Heshiiskii la galay sanadkii 2015-kii ujeedkiisu waxa uu ahaa in Iiraan laga qaado cuna qabateynta si meesha looga saaro Barnamaijka Nuclear-ka, hase yeeshee Mareykanka ayaa sanadkii la soo dhaafay ka baxay heshiiska waxaana uu saaray Iiraan cunna qabateyn cusub.
Mareykanku waxaa uu Maraakiib iyo Diyaarado geyay gacanka khaliijka waxaana uu ku amaray shaqaalaha ka jooga dalka Ciraaq in ay halkaas isaga baxaan.
Inakstoo hoggaamiyaasha labada dhinac ay sheegayaan in aysan rabin dagaal haddana xiisadda gacanka khaliijka ayaa sii dheeraatay.